Tag: email asọmpi nyocha | Martech Zone
Tag: email asọmpi nyocha
Kedu mgbe ndị asọmpi gị na-eziga ozi ịntanetị ha? Kedu ka ozi ịntanetị ndị ahụ dị? Kedu ụdị ahịrị isiokwu ha na-eji? Kedu akwụkwọ ozi email kachasị ewu ewu na ụlọ ọrụ gị? Ndị a bụ ụdị ajụjụ ndị nwere ike ịza site na iji Email Insights, ngwa ọrụ ndị na-ere ahịa email iji chọpụta akwụkwọ akụkọ email kachasị ewu ewu na / ma ọ bụ asọmpi gị. Email Insights nwere akwụkwọ akụkọ kachasị ewu ewu nke ụlọ ọrụ haziri ka ị nwee ike ịchọta ya n'ụzọ dị mfe